Wararka - Ma ogtahay haddii shaashadda asalka ah la beddelo marka la dayactirayo taleefanka gacanta? Kaalay oo ku baro sida loo aqoonsado shaashadda dhabta ah iyo shaashadda beenta ah
Ma ogtahay in shaashadda asalka ah la beddelayo marka la dayactirayo taleefanka gacanta? Kaalay oo ku baro sida loo aqoonsado shaashadda dhabta ah iyo shaashadda beenta ah
Caadi ahaan, waxaan inta badan la kulannaa xaaladda in shaashadda taleefanka gacanta uu shil ku jabo, kiisaska qaarkood waa jabaan dabool muraayad ah, qaarna shaashadda gudaha ma muujiyaan sidoo kale waa la jebiyey. Dayactirka dhinac saddexaad wuxuu guud ahaan ku weydiin doonaa inaad rabto midka asalka ah ama midka caadiga ah. Guud ahaan, kala duwanaanshaha qiimaha ma weyna, taas oo ah inuu kugu hago inaad beddesho midka asalka ah. Laakiin ma ogtahay in shaashadda uu beddelay ay tahay tii asalka ahayd? Tifatiraha yar ee soo socda ayaa ku baraya sida loo garto shaashadda runta iyo tan beenta ah.
Ugu horreyntii, waxaan ka hadli doonnaa shaashadda fudud ee banaanka. Sidaan hadda soo sheegnay, shaashadda asalka ah ee soosaarayaasha ayaa asal ahaan ah kulammo shaashadeed. Sidaa darteed, waxa loogu yeero shaashadda dibedda ee asalka ah aad ayey u yartahay. Farqiga u dhexeeya asalka iyo kuwa caadiga ah ee shirkadaha dayactirka badankood waa farqiga u dhexeeya muraayadda gadaal gadaal iyo muraayadda caadiga ah, waxaana jira shaashado dibadeed oo dhab ah oo asal ah.
Guud ahaan, shaashadda lagu beddelay mashiinka Android aad ayuu u liitaa. Marka uu jabo, sidoo kale waa ka fiican tahay. Xirfadda kala soocidda ayaa ah in fiiro gaar ah loo yeesho habsami u socodka 2.5D radian ee shaashadda shaashadda iyo xaddiga lakabka dheecaanka saliidda. Guud ahaan, qaybaha leh 2.5D radian shaashadda dibedda ee saboolka ah ma ahan kuwo siman oo aad u siman. Qiimaha shaashadda noocan ahi waa inta u dhexeysa 80 iyo 90. Shaashadda fiicani waa mid siman oo siman, Lakabka saliidu waa mid qaro weyn, laakiin qiimaha kama badnaan doono 300 yuan. Haddii macaash doonku ku weydiiyo inaad weydiisato RMB 4500, isla markiiba waad bixi kartaa. Looma baahna in halkan lagu hagaajiyo. Sababtoo ah baahida weyn iyo silsiladda saadka ee shaashadda dibadda ee Apple, tayada shaashadda dibedda aad ayey u wanaagsan tahay, xitaa waa la barbar dhigi karaa shaashadda asalka ah, qiimuhuna kama badna 300 yuan.
Weli waxaa jira shaashado badan oo asal ah oo ku yaal suuqa loogu talagalay isugeynta shaashadda, oo laga sameeyay kanaallo gaar ah oo kala duwan. Waxaa jira noocyo badan oo shaashado aan asal ahayn, oo ay ku jiraan shaashadda cadaadiska gadaal ee saxanka daboolka oo la beddelay, shaashadda asalka ah ee LCD ee leh fiilo fidsan ama iftiinka dambe, shaashadda sare ee shaashadda, iwm ka dib markaad akhriso noocyada, waxaad si toos ah uga hadli kartaa xirfadaha.
Maalmahan, mobilo badan ayaa ah shaashadda OLED, oo lacag badani ku baxday. Dabcan, qiimaha beddelka shaashadda sidoo kale waa sarreeyaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo faa'iido badan oo aad u xun oo aan dooneynin inay ku beddelaan shaashadda asalka ah ee adiga, laakiin sidoo kale ku beddela hal LCD shaashadda qalabka rakhiis ah, sababtoo ah tan waxaa la oran karaa waa faa'iido, shaashadda xitaa waxay kasban kartaa 500 ama 600 yuan, bannaanka lama arko, haddii aan tan la kulanno, waxaan qaadan karnaa muraayad weyneyn ah si aan u aqoonsanno.
Ku hagaaji shaashadda shaashad cad oo aan qoraal ama naqshad lahayn inta suurtagal ah, oo fiirso qaabka pixel ee shaashadda oo leh muraayad weyneyso ah. Sida taxanaha 'iPhone X' iyo taxanaha kore, calamado badan oo gudaha ah ayaa ah Samsung's pentale diamond pentale sub-pixel arrangement, sida midka kore.
Huawei P30 pro iyo asxaabtiisa 20 Pro waa qorshayaasha "Zhou Dongyu" ee BOE, iyo LG oo ah heshiis pentile caadi ah, sida ku cad shaxanka kor ku xusan,
Beddelka LCD waa ka duwan yahay. Intooda badan waxaa lagu habeeyay qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka 'RGB' Sida ka muuqata shaxanka kore, haddii aad ogaato in taleefankaaga gacanta uu asal ahaan yahay shaashadda OLED oo lagu beddelay LCD qof macaash doon ah, waxaad isticmaali kartaa habkan si aad isla markiiba ugu tagto isaga si uu lacag u waayo.
Hab kale ayaa ah in lagu garto in shaashadda dibedda ee kulankani uu yahay mid asal ah, sida habka kore. Intaas waxaa sii dheer, shaashadda si weyn ugama badnaan karto soohdinta kadib markii shaashadda la beddelo. Guud ahaan, shaashadda shaashadda ee aan ahayn tii asalka ahayd way ka dhumuc weynaan doontaa ta asalka ah. Marka waxaa jiri doona caan.
Qodobka kore waa habka adiga lagaa kabsado. Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.